Karnalikhabar » तिम्रो विर्यको मुल्य कति ? तिम्रो विर्यको मुल्य कति ? – Karnalikhabar
प्रकाशित मिति :2017-08-09 17:53:08
सिर्जना बस्नेत, त्यो दिन अर्थात् मैले एक्काइस वर्ष पहिलाको रहस्य खुलाएको दिन । मेरो स्मृतिमा ताजै छ २०७२ असारको पहिलो त्यो हप्ता । बिस्तारै धर्ती भाँसिए जस्तो महसुस भएको थियो । अरुको लागि दिन सधै जस्तो सामान्य नै थियो । तर मेरो लागि फरक ।
दश बज्न दश मिनेट नै बाँकी थियो । म कोठाको ढोकामा चाबी लगाउँदै थिएँ । मोवाइलको घण्टी बज्यो । ब्यागबाट मोबाइल निकालेर मोबाइलको स्क्रिनमा आँखा दौडाएँ । मोबाइलमा सेभ रहेको नम्बरबाट फोन आएको रहेछ ।त्यो नम्वरमा मैले एक पटक फोन गरेकी थिएँ । म त्यो व्यक्तिलाई हेर्न आतुर थिएँ । कस्तो होला उसको अनुहार ? कपाल फुलेको होला कि कालै होला ? अग्लो छ कि डल्ले होला ? त्यो भन्दा पनि मेरो मनमा पहाड बनेर बसेको प्रश्नको उत्तर उसको मुखबाट पाउँला कि नपाउँला ? पाएँ भने झन् कति तड्पिनु पर्ला मैले ? यस्तै अनेकौं प्रश्नको सगरमाथा थियो म भित्र । अतः मैले मोबाइलको रिसिभ बटममा औला दबाए ।
म बिस्तारै गल्दै थिएँ । म भित्र भएको त्यो उर्जा बिलाउँदै गएको थियो । आफुलाई सम्हाल्दै बजारको एक होटलको नाम दिए । त्यही गएर बस्नु म आउँदै छु भनेर फोन राखिदिएँ । प¥यो भने म हजार जनाको अगाडी भाषण गर्न सक्छु जस्तो लाग्थो । तर एक अपरिचित मान्छेको बोलीले नै मलाई गलाएको थियो ।मैले धेरै कोशिस गरेर उसको फोन नम्बर पत्ता लाएकी थिएँ । म आफै उसँग भेट्न चाहन्थे तर किन मन बेचैन थियो । म जुन कुरा उसँग गर्न चाहँदै छु त्यो कुरा गर्न मैले धेरै वर्ष अगाडि नै साहस बटुलेको थिए ।ँ त्यो दिन बर्षाैदेखि नियतीले पढाएको पाठको परीक्षा दिने दिन जस्तो लागेको थियो ।
अफिस जान कोठाको चाबी लगाउदै गरेको मान्छे एका एक जान मन नै लागेन । मोवाइलको म्यासेज बक्समा गएर ‘मलाई सञ्चो भएन सो अफिस आउन सक्दिन आज सरी’ भनेर हाकिमलाई म्यासेज सेन्ट गरें । एक गिलास पानी पिएँ अनि उसलाई बस्न लगाएको होटल तिर लम्किएँ ।करिब दश बजेर तीस मिनेट भैसकेको थियो मेरो घडीमा । बाटोमा अफिस जाँदै गरेका निचेजानेका थुप्रै भेटिए तर अघि पछि जस्तो बोल्न मन लागेन । म आफ्नै रफ्तारमा दौडिएको थिएँ । होटलमा पुगेर एकैछिन रनभुलमा परें । फोन गर्ने मान्छे कुन चाँही हो भनेर ।
दुब्लो मान्छे, चुच्चो नाक अनि खैरो कमिज सुरुवालमा कालो स्टकोट लगाएको थियो । उसले तपाई नै हो ? भनेर प्रश्न ग¥यो । मैले हो भने अनि क्याबिनमा गएर कुरा गरौँ भने । जहाँ कोही मान्छे नहोस् भन्ने म चाहन्थे । उसले हुन्छ भन्यो म क्याबिन तिरको सिँढी चढ्न थालें । उ मेरो पछि पछि लाग्यो ।क्याविन सफा थियो । दुई जना आमनेसामने बस्न मिल्ने कुर्सी थिए । टेबलमा सेतो कपडा बिच्छ्याइएको थियो । त्यसमाथि राता फुल सजाइएका थिए । यो क्याविन प्रेमिल जोडीहरु प्रति लक्षित गरेर बनाएको हुनुपर्छ । हुन त धेरै जसो प्रेमिल जोडीहरु नै हुन्थे क्याबिनमा ।
वेटर गएपछि मलाई निकै गाह्रो भयो । कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ ? कसरी गरौँ भनेर । मैले आफुलाई सम्हाल्दै परिचय गरें । उसले पनि परिचय दियो । अनि किन भेट्न चाहनु भयो ? प्रश्न पनि थप्यो । मैले उत्तर दिन नपाउँदै वेटरले डिउको गिलास लिएर ढोकाबाट भित्र आउने अनुमति माग्यो । मैले आउ भन्दै इसारा गरें । अनि माथि नआउनु केही चाहिए फोन गर्छु भनें । वेटर हस् भन्दै कोठाबाट बाहिरियो ।फेरि केही छिनको मौनता पछि मैले एक घुट्को पिएँ । उसलाई भेट्नुको कारण पहिलो त पुरा भैसकेको थियो । यो भन्दा पहिला त्यो अनुहार मेरा आँखाको लेन्सले खिचेका थिएनन् । आज त्यो चित्र नमेटिने गरी दिमागको मेमोरिमा सेभ भइसकेको थियो ।
मैले भित्रबाट लामो सास तानें अनि कुरा अगाडी बढाएँ । आफूले काम गर्ने अफिसबारे कुरा गरें । बाहना पनि बनाएँ, भुकम्म पछि भत्किएका घरहरुलाई सयोग गर्ने कुरा जानकारी गराउन भेट्न चाहेको भनेर । वास्तवमा म भत्केको घर भन्दा पनि भत्किएको मनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थें ।सामान्य कुराकानी पछि उ पनि खुलेर कुरा गर्न थाल्यो । गाउँमा वडा संयोजक रहेछन् । दुई भाइ छोरा र एउटी छोरीको बाबु पनि । जेठो छोरो आर्मीमा जागिरे कान्छो छोरा र छोरी पढ्दै रहेछन् । उनको बारेमा थाहा पाए पछि म जुन कुरामा भेट्न चाहन्थें त्यही प्रसंगमा विस्तारै प्रवेश गरें ।
‘वन सम्बन्धी काम गर्ने । खाना बनाउनेदेखि अफिसको सबै काम जानेको छु ।’ उसले गरेको कामको बयान ग¥यो ।मैले थप सोधें – तपाईं काम गर्दा देवयानी भन्ने महिलालाई चिन्नु हुन्थ्यो ? मेरो प्रश्नले ठुलै प्रहार गरे जस्तो विम्व उसको अनुहारले बोल्यो । अँध्यारो अनुहार लगाएर प्रतिप्रश्न ग¥यो – किन र ?
म बिस्तारै रहस्यको भन्डाफोर गर्न तल्लीन थिएँ । मनमा धेरै रिस उठेको थियो तर अनुहारमा देखाउनु भएको थिएन । ‘देवयानी राम्रो चरित्रको महिला हैन रैछ है ?’ उसको राय जान्न चाहें ।अँ.. सबैले त्यस्तै भन्थे । उसले आधा जवाफ दियो ।
महिला खबर डटकमको अनुसार मेरो बाउ चिनेको यथार्थ आफ्नै मनले कदापी स्विकारेन । नाता पनि देखाउने भन्दा अनुभुति गर्ने कुरा रैछ । प्रश्नहरुको सगरमाथाबाट विजयी भएर फर्किदा कसैले ताली बजाएनन् । न त आफ्नै मनले बजायो ताली । यद्यपी, जीत त आखिर जीत नै हो । केही पाउनु मात्र जीत हैन केही जान्नु पनि जीत रहेछ । नियतीको परीक्षामा प्रथम भएको त्यो दिन अझै पनि मसँग ताजा छ ।